Wednesday October 14, 2020 - 08:41:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Mareykanka oo ay kusoo food leedahay doorasho adag ayaa bilaabay in uu shacabka American ah ku afgubaadsado soo badbaadinta ciidamadiisa dagaallada culus uga jira qeybo katirsan wadamada caalamka Islaamka.
Donald Trump wuxuu ku dahaaqayaa in maamulkiisu udiyaar garoobay sidii uu ciidamadiisa ugasoo saari lahaa wadamo ay kamid yihiin Soomaaliya iyo Afghanistan.
Madaxweyne Mareykanka wuxuu u sheegay la taliyeyaasha sarsare in uu doonayo in ciidamadiisa uu kalasoo baxo Soomaaliya sida ay sheegeen dad xog ogaal u ah arrinkan taas oo u ogolaaneysa inuu ka dhabeeyo balanqaadyadii ololahiisa doorashada ee ahaa in askarta dib loogu celiyo dalkooda.
Warbaahinta ugu afka dheer dalka Mareykanka ayaa sheegtay in wasaaradda gaashaandhigga ee loo yaqaan Pentagon-ka ayaa bilaawday in ay qiimeyso soo jeedinta uga timid Trump ee ah ciidamada American-ka lagasoo saaro Soomaaliya.
Wararku waxay sheegayaan in mas'uuliyiinta ugu sarraysa wasaaradda gaashaandhigga ay kulamo ka yeesheen soo jeedinta Trump waxaana kamid ah mas'uuliyiinta ka niqaashaya qorshaha Trump Robert O’Brien oo ah lataliyaha amniga qaranka Mareykanka iyo Mark Esper oo ah wasiirka difaaca.
ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka in markii dambe uu wadahadallada go'aanka looga gaarayo arrintan uu ku biiray Jeneraal Mark Milley oo ah taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka.
Mareykanka waxaa Soomaaliya uga sugan ciidan udhaxeeya 650 illaa 800 oo askari sida ay warbaahintu sheegto balse majiro tirakoob rasmi ah oo dowladda Mareykanku ay ku caddaysay tirada ciidamadeeda duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxa dowladda taakta daran ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa wareysi uu bixiyay uga codsaday mareykanka in ciidamadiisu ay sii joogaan Soomaaliya si ay uga gacan siiyaan dagaalka ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Sida ay baahisay shabakadda bloomberg mas'uuliyiinta amniga qaranka Mareykanka ayaa diiday in ay tacliiq ka bixiyaan arrimahan ku saabsan in Trump uu ciidamadiisa kalasoo baxayo soomaaliya.
Hoggaanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa agaasimay howlgallo lagu laayay ciidamo American ah oo saldhigyo ku lahaa dalalka Kenya iyo Soomaaliya, weerar sanaddii lasoo dhaafay ka dhacay saldhigga Balidoogle ayaa sababay dhimashada boqolaal askari American ah.
weerar kale oo ka dhacay saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya ayaa sababay khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamada Mareykanka, xukuumadda Washington waxay doonaysaa in qorshaheeda ka bixitaanka Soomaaliya ay lameel dhigto baqa cararkeeda dalka Afghanistan.
Falanqeeyayaasha ayaa aamisan in haddii ay ciidamada American-ka ah ay isaga baxaan Soomaaliya ay sii daciifi doonaan ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah ee la shaqeeya kuwaas oo dhiigbax dhan walba ah kala kulmaya Shabaabul Mujaahidiin.
Bartamihii sanadii 2017 ayuu Donald Trump iclaamiyay in uu ciidamo dheeri ah udiray soomaaliya islamarkaana wuxuu soo saaray go'aamo faraya saraakiisha in ay geysan karaan duqeymo aan kala sooc laheyn oo lagu xasuuqayo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah.
ku dhowaad afar sano kadib go'aamadii Trump ee qar iska xoornimada lahaa ee Soomaaliya ayuu jihaadka soomaaliya sii bulaalay halka dib udhac dhan walba ah ay dareemayaan soo duulayaasha Soomaaliya melleteti ahaan iyo maamul ahaan.
Diyaaradaha Mareykanka ayaa boqolaal qof ku xasuuqay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyagoo ku andacoonaya ladagaallanka mujaahidiinta.
Hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa dhowr jeer soo saaray warbixinno ay ku caddeynayaan gabood fallada uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya.
Warbixinno dhowaan ay soo saareen sirdoonno caalami ah ayay ku sheegtay in Shabaabul Mujaahidiin ay tahay jamaacada Jihaadiga ah ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika iyadoona ku taxadisay ololihii dagaal ee uu Trump iclaamiyay sanaddii 2017